बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कुनै गुनासो छ ? यसरी गर्नुस् उजुरी « Salleri Khabar
९ बैशाख, काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएका सेवाप्रति तपाईको कुनै प्रकारको गुनासो छ ? या उनीहरुले दिएको सेवामा कुनै जटिलता पैदा भएको छ ? यदि छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सेवा शुरु गरेको छ ।